एस. पी. लाई किन सम्मान गर्ने ?-Nagarikaawaj.com
एस. पी. लाई किन सम्मान गर्ने ?
शनिबार, असार २१, २०७१
– केही दिन आगडि बुटवलको मिलन चोकमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला स्तरका नेतास“गै चिया पिउदै गर्दा एक क्रेसर व्यावसयी आई पुगे । मस“ग कुनै परिचय नभएका तर नेतास“ग राम्रो सम्बध रहेका ती व्यावसायीले चिया पसलमा रहेको दैनिकपत्र पल्टाउ“दै गए र भित्री पृष्टमा रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख विक्रम सिहं थापालाई उपभोक्ता मञ्च नेपाल रुपन्देहीले गरेको सम्मान कार्यक्रको तस्बीरमा देखेपछि उत्तेजित हु“दै भने यस्तो एसपीलाई सम्मान गर्ने ? त्यसका कारण यहा“ के के भएको छ । सम्मान होइन तत्काल सरुवा गराउनु पर्ने मान्छेलाई सम्मान गरेर जिल्लामा कसरी राख्न मिल्छ ? अनि यस्ताको कार्यक्रमलाई पत्रिकाले पनि छाप्ने भन्दै बम्किए । रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापालाई उपभोक्ता मञ्च नेपाल रुपन्देहीले उपभोक्ताको पक्षमा काम गरेको भन्दै सम्मान गरेको थियो ।
करिब ११ महिनाअगाडि रुपन्देही प्रमुख भई आएका थापाले जिल्लामा के काम गरे ? कस्ता काम गरे ?उनले गरेका निणर्यहरुले न्यायसंगत थिए कि थिएनन् ? उनले गर्दा यहा“ कस्तो राम्रो परिवर्तन भयो वा झन् नराम्रो भयो ? त्यो मूल्याङ्कनको पाटो नहेरी ती व्यावसायी एककोहोरो बम्किएपछि चिया पसल रहका सबै ग्रहकहरुले प्रहरी प्रमुख बारेमा आआफनो तर्क राखे । अधिकांशले थापाको कामको खुलेर प्रशंसा गरे ।
नेपालमा राजनीतिज्ञ , कर्मचारी तन्त्रले राम्रोस“ग आफै भूमिका निर्वाह नसक्दा जनताहरु अत्यन्तै निरास भएका छन् । बजारमा मह“गी बढेको बढै छ , सेवाग्राही क्षेत्रहरुमा उपभोक्ताहरु ठगिएका ठगिएै छन् । सामान्य नागरिकले सानो काम गर्नको लागि कि सोर्स लगाउनु पर्छ , कि घूस खुबाउनु पर्छ । हरेक क्षेत्रमा भष्ट्राचार मौलाएको छ । यस्तो निरस अवस्थामा नागरिकले कोस“ग के आशा गर्ने ? नागरिकबाट चुनिएर गएका नेताहरु कसरी झूट कुरा गरेर माथि जाने र आफनो स्वास्र्थपूर्ति गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट हामीले तलब पाएको र छिटो छिरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व बिर्सेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीमा केही राम्रा काम गर्ने अधिकृतहरु अघोषित रुपमा समाजको हिरो बन्ने स्थान पाउ“छन् ।
यो नेपाल मात्र होइन विश्वभरको प्रचनलन हो । किनकि धरैले काम नगर्दा एक दुईजनाले मात्र काम गर्दा जनताहरुले त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई नै हिरो मान्ने गर्छन् ।
सोही अनुसार मिडियाले स्थान दिने गर्छन् । भारत , पाकिस्तान , बंगला देशमा पनि कतिपय अवस्था यस्तै भएको छ । नेपालमा जस्तै प्रहरीभित्र ठूलो विकृति ती देशहरुमा पनि छ ।
त्यही विकृत भएको अवस्था राम्रो काम गरेर चर्चामा आउने प्रहरी अधिकृत मध्येका एक हुन् विक्रम सिंह थापा । त्यही कारणले उनले चिया पसलमा गाली गर्ने र समर्थन गर्नेहरु हुन्छन् । केही समय आगडि काठमाडौंमा एसएसपी रमेश खरेलको निकै चर्चाका आएका थिए । मिडियाले उनको वाहीवाही गरेका थिए । यद्धपि खेरले परिणाममुखी काम गरेका थिए , या थिएनन् त्यो बाहिर आएन । तर थापाले रुपन्देही समान्य नगारिक देखिने गरी काम गरेका छन् ।
आखिर थापाको चर्चा किन भयो ? रुपन्देहीमा थापाले तेल चोरी , अवैध ढुगां गिट्टी भारत निकासीमा रोक्क उल्लेखीय योगादन दिए । उक्त कमदबाट प्रभावित भएर उपभोक्ता मञ्च नेपाल रुपन्देहीले सम्मान गरेको हो । यस क्षेत्र शान्ति शुरक्षा पनि उल्लेखीय सुधार ल्याउने काम गरेपछि लुम्बिनी विकास कोषले पनि सम्मान गरेको हो । अन्य संघ संस्थाहरुले अहिले सम्मान गरेर अझै नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न हौसला दिएका छन् ।
उनी जिल्लामा आउनु भन्दा १ हप्ता उगाडि सरकारले राजपत्रका क्यासिनो बन्द गराउने सूचना जारी गरेको थियो । तर पहिले एस्पी र जिल्ला प्रशासन चूप लागेर बसेको थियो । थापाले हाजिर भएको दुई दिनमै भैरहवा रहेका मिनी क्यासिनो बन्द गराए । त्यस लगत्तै सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा हात हाले । उनका कारण राजश्वमा राम्रो बृद्धि हुन पुगेको छ । रुपन्देहीमा हुने नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीमा लामो लडाइ“ थापा लड्नु भयो । जसबाट नोक्सान व्योहरी रहेका चिया पसलमा गाली गर्ने ती क्रेसर व्यावसायीहरुलाई र उनीहरुको केही दानापानी खाएका व्यक्तिहरुलाई रिस उठ्नु स्वभाविकै हो । यहा“निर एउटा महत्वपूर्ण विषय पनि छ । रुपन्देहीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी , प्रहरीका लुम्बिनी अञ्चल प्रमुख तथा तत्कालीन एल.डि.ओ लगायतले तत्काल उत्खनन् शुरु गर्ने निर्णय गर्दा थापाले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट मात्र लेखेनन् जिल्ला सञ्चालित क्रेसर उद्योगहरुमा अवैध रुपमा राखिएका नदीजन्य वस्तुको अनुसन्धान नगर्दासम्म उन्खनन् गर्न नदिने निरन्तर अडान राखे । पछि गृह मन्त्रालये थापाको अडानको पक्षमा उभियो भने हाल सरकारले देसभर नदी किनारा उत्खनन् रोक्ने निर्णय गरेको छ । एउटा मामुली एस.पीले उठाएको कदमलाई सरकारले सही ठानेर नदी दोहन देशभर रोक्ने निणर्य गरेको छ । उनको उडान नहु“दो हो त अहिले परिस्थिति निकै फरक पर्नेवाला थियो ।
प्रहरी अधिकृत गरेको कामलाई यसरी सरकारले निणर्य गरेर र अन्य जिल्लामा लागू गर्ने काम कहिले काहीं मात्र गरेको रेकर्ड नेपालमा छ । प्रहरी अधिकृत पनि निरन्तर आफ्नो अडानमा रहन निकै कम मात्र सकेका घटनाहरु छन् । थापाले उक्त कदम चाल्दा विभिन्न चुनौतीहरु ब्योहोरे ।
किनकि फिल्ममा हिरोले जसरी भिलेनस“ग लड्दा कठिनाई ब्योहोर्छ । त्यही अनुसार समाज हिरो बन्ने व्यक्तिले पनि आफ्नै संगठनभित्र , बाहिरबाट थुपै चुनौतीको समाना गर्नुपर्छ ।
यहा“ तस्करहरुले ठूलो धनराशि खर्चेर सञ्जाल निर्माण गरेका थिए । उनलाई सरुवा गराउनसमेत तस्करहरुले चलखेल गरेका थिए । आयल निगम हुने ठूलो मात्रमा तेलचोरी धटनालाई बाहिर ल्याएर धरैबाट बधाईका पात्र बने । रुपन्देहीमा भएको तेलचोरी धटनाले अन्य स्थानमा तेल चोरी गर्ने सञ्जाल आत्तिएको छ । तेल चोरी प्रकरणमा नागरिकहरु सडकमै आएर थापालाई समर्थन गरे । यस्तै समर्थन प्रहरीले बिरलै पाउ“छ । तस्करीबाट बदमान सुनौली नाकमा तस्करको नाम निसाना नभेटाउने गरी कदम चालेर रोक्न सफल भए ।
थापाले एकपछि अर्को नागरिकको मन जित्ने काम गरेका छन् । रुपन्देही लागू औषधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गएपछि थापाले लागू औषध अपरेसन नै सञ्चालन गरे । उनले लागू आौषध कारोबारीलाई प्रकाउ गर्न सफल भए । अहिले घरघरमा चिन्ताको विषय बनेको लागू औषध नियन्त्रण गर्न जनचेतना आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै गाउ“ गाउ“मा जनचेतना जनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरे । रुपन्देहीको देवदहमा प्रहरीले विशाल ¥याली निकालेको थियो । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय आमा समूह , क्लबहरु , विद्यालयको ठूलो सहभागिता रहेको थियो भने बुटवलको सिद्धेश्वरीमा विशाल कार्यक्रम गर्न प्रहरी सफल भएको थियो । अन्य स्थानमा यस्तौ कर्यक्रम प्रहरीले गरेर लागू औषध सेवनमा न्यूनीकरण गरेको छ ।
। यस्ता कार्यक्रमबाट लागू आौषध तस्करहरु तर्सेका छन् । अझ थापाले लागू ओषध तस्करलाई भेटाए खुट्टा भा“चेर ल्याउन स्थानीयहरुलाई आग्रह गर्दा तस्करीका कमी आएको छ । नेपाल प्रहरी संगठनभित्रका सबै अधिकृतहरु काम कारवाही प्रशंसा गर्न लायक नभएको अवस्था निरन्तर जनता पक्षका रहेर काम गर्ने थापा भएको उनलाई धरै क्षेत्रबाट प्रशंसा पाएका हुन् भने मिडयाले पनि राम्रो साथ दिएको हो । छोटो समयमा उनलाई यस क्षेत्रका सामाजिक संघसंस्थाहरुले मन पराएर सम्मान गरेको हुन् । लुम्बिनी विकास कोष , उपभोक्ता मञ्च नेपाल आदिले सम्मान गरेका छन् । बुटवलका पनि विभिन्न समाजिक संस्थाहरुले सम्मान गरेका छन् । थापाको पृष्ठभूमि हेर्दा बा“के कपिलवस्तु , ललितपुरमा निकै राम्रो काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको पहिचान भएका व्यक्ति हुन् । त्यसर्थ उनले अझै धरै राम्रा काम गर्ने अपेक्षा नागरिकले गरेको छन् । नेपाल प्रहरीलाई थापा जस्ता दक्ष कम्तीमा १० जना प्रहरी अधिकृत भएमा प्रहरीसंगठनमा जनतामा परेको नकारात्मक छाप स्वतःहटाउन सक्छन् । उनको कामले उनी , रुपन्देही प्रहरी , मात्र नभई समग्र संगठनको इज्जत बढाएको छ ।
रोडढुङ्गाको अ‍ैधब निकासी रोक्न लामो लडाई मात्र लडेन्
आयल निगम हुने ठूलो मात्रामा तेलचोरी धटनालाई बाहिर ल्याएर धरैबाट बधाईका पात्र बने । रुपन्देहीमा भएको तेलचोरी धटनाले अन्य स्थानमा तेल चोरी गर्ने सञ्जाल आत्तिएको छ । तेलचोरी प्रकरणमा नागरिकहरु सडकमै आएर थापालाई समर्थन गरे । यस्तै समर्थन प्रहरीले बिरलै पाउ“छ । तस्करीबाट बदमान सुनौली नाकामा तस्करको नाम निसाना नभेटाउने गरी कदम चालेर रोक्न सफल भए । थापाले एकपछि अर्को नागरिकको मन जित्ने काम गरेका छन् । रुपन्देही लागू औषधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गएपछि थापाले लागू औषध अपरेसन नै सञ्चालन गरे । उनले लागू आौषध कारोबारीलाई प्रकाउ गर्न सफल भए ।